UluLawula njani ulwazi ngaphandle kwe-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ulawula njani ulwazi ngaphandle kwe-Twitter?
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 298
I-Twitter yeyona nkqubo iphambili yokuhlaziya iindaba ikhoyo ngoku. Kwimeko yokuqala, uya kufumana olu hlaziyo kwicandelo "leTrends", apho amawaka eTweets enika izimvo ngento enye, zihlala zisiba ziindaba.
Iqonga le-Twitter likunceda ulawule ulwazi lweakhawunti yakho ngaphandle kwayo. Inani leempapasho ozibonayo kwiakhawunti yakho kunye nezo uzenzayo ziya kubanakho ukuqwalaselwa kwiprofayile yakho. Inkqubo ilula, kodwa kuya kufuneka ulandele amanyathelo ambalwa.
Ulawulo lolwazi lunokudibaniswa ngeendlela ezininzi: Lawula iiTweets, ngokusekwe kwiiakhawunti zomsebenzisi, izaziso, iiTwets frequencies, ukuThulisa, ukuThintela, kunye nengxelo yeakhawunti
Ukuya kwicandelo lezaziso, ngaphakathi Uqwalaselo nemfihlo ungalawula izaziso ozifumanayo. Phakathi kwezo unokuzilawula zezi: iiakhawunti ezilandele ezakho, iimpendulo, imiyalezo ethe ngqo kunye nezinto ozithandayo ezifunyenweyo.
Lawula iiakhawunti ozilandelayo
UKUBA ufuna ukulandela iakhawunti okanye iiakhawunti ezithile, Kuya kufuneka uye kwiakhawunti ofuna ukuyilandela kwaye ufumane i-ellipsis icon ecaleni kwegama lomsebenzisi. Nje ukuba ucinezelwe, kwifestile ebonisiweyo, uya kufumana ukhetho "yeka ukulandela".
Ukuguqula inkqubo, wenze okufanayo inkqubo.
Ukulawula amaxesha eeTweets.
Ukuba ufuna ukwandisa iiTweets kwaye uphucule amava akho e-Twitter, kuya kufuneka uye kwicandelo "Bonisa kancinci."
Indawo yokutshixa ikunceda ukuba ususe nayiphi na into eyingozi ekwiakhawunti ethile kunye neyakho. Iluncedo kakhulu kwiimeko ze Ukuxhatshazwa Ukuhlukunyezwa kwiinethiwekhi.
Umsebenzisi ovaliweyo akasayi kuba naluphi na uhlobo lonxibelelwano neakhawunti yakho. Akukho ukufikelela kwiiTweets zakho, akukho mpendulo, izimvo kunye nawuphi na omnye umsebenzi.
Ukuvimba, yiya kwiakhawunti ofuna ukuyivimba kunye nokubeka i icon enamachaphaza ngezantsi komfanekiso wentloko. Xa ucinezela, kwithebhu ebonisiweyo, ukongeza ekuboneni ukhetho oluninzi, uya kuyifumana NONE"Ecaleni kwegama lomsebenzisi.
Nje ukuba ucinezelwe, iqonga liya kukwazisa ukuba ufuna ukuvimba iakhawunti. Cinezela "Vimba" kwakhona ukugqiba inkqubo.
Oku kunokubuyiselwa umva ngokulandela inkqubo efanayo. Kwakhona ukusuka "kuseto nakubucala" ungalawula zonke iiakhawunti ozivimbileyo, uzivule nganye nganye.
Lawula iingxelo zeakhawunti
Elinye inyathelo ngaphandle kwe-blockade, sisikhalazo. Oku kuyasebenza ukwazisa iqonga lezinto ezingenangqondo ezinokuba nazo ezinye iiakhawunti kwi-Twitter. Umzekelo, upapasho oluchasene nemigaqo yenkqubo ye-Twitter, enje ngemisebenzi engekho mthethweni, ukuziphatha kakubi ngokwesondo, ukuxhaphaza, phakathi kwezinye izinto ezininzi.
Ukuqhubeka nengxelo, skrolela kwiakhawunti ofuna ukuyifaka ingxelo. Kwi icon ye-ellipsis, i-tab eneendlela ezahlukeneyo ziya kubonakala, apho ungacinezela khona "xela" ecaleni kwegama lomsebenzisi we-akhawunti.
Nje ukuba uyixele, I-Twitter iya kukubuza ukuba uyafuna na ukuqinisekisa isikhalazo. Cinezela yamkela ukugqibezela inkqubo.
Indlela yolawulo lolwazi
Ungalawula ulwazi kwihlabathi liphela, ukulandela le ndlela ilandelayo:
Khangela "Useto nemfihlo"
Emva koko uye ku "Ubumfihlo nokhuseleko". Ngaphakathi koku uyakufumana icandelo "Idatha ekwabelwana ngayo kunye nomsebenzi ongaphandle kwe-Twitter", apho uya kufumana "Umsebenzi ongaphandle kwe-Twitter".
Kule yokugqibela, uya kuba nakho ukuvuma okanye ukungasebenzisi ulwazi lwakho olwenziwa yi-Twitter ngaphandle kwayo kwaye "Yenza ngokwezifiso ngokwesazisi sakho."
1 Lawula izaziso
2 Lawula iiakhawunti ozilandelayo
2.1 Ukulawula amaxesha eeTweets.
2.2 Lawula izitshixo
3 Lawula iingxelo zeakhawunti
4 Indlela yolawulo lolwazi
Ungasenza njani isitishi sakho seYouTube?
Utsiba njani iintengiso ezinde kakhulu kwiYouTube?